?Meesha dabku uu ka dhashay waan malaynaynay, maxaa yeelay jid loo marona ma lahayn, carradoo dhanna waa dhul ciriiri ah? M/weyne Faroole. – Radio Daljir
?Meesha dabku uu ka dhashay waan malaynaynay, maxaa yeelay jid loo marona ma lahayn, carradoo dhanna waa dhul ciriiri ah? M/weyne Faroole.
Diseembar 3, 2011 12:00 b 0
Garowe, December, 03 ? Madaxwaynaha Puntland Dr C/raxmaan Sh. Maxamed Maxamuud ?Faroole? ayaa sheegay in la malaynayay dabkii ka dashay suuqa wayn ee magaalada Bossao, waxaana uu tilmaamay in hay?addaha dab-damisku ay waayeen jid ay u maraan, iyo si loo damiyo toona.
Madaxwayne Faroole waxaa uu sheegay inay qorshaynayaan in halkaasi ay u diraan guddi soo xaqiijiya hantida khasaartay, dadka hantida lahaa iyo sida ay u kala lahaayeen, ujeedada ka dambaysay dabkaasi in uu dhasho, iyo xaaladda dhabta ah ee suuqaasi.
M/weyne Faroole ayaa burhaan Alle ku tilmaamay in goobtaasi uusan ka ag-dhawayn wax bartool ah, waxaana uu hadalkiisa raaciyay suurto-galnimada dabka oo siisiyaada haddii halkaasi shidaal ka agdhawaan lahaa.
M/weyne Faroole waxaa uu sheegay in suuqaasi la qorshaynayay in goor horeba laga rarro goobta uu ku yaalay, waxaana uu intaas raaciyey in hadda loo iclaamiyay goob cusub oo ka billan goobta markii hore ee uu ku yiilay.
Ugu dambeyntii waxaa uu M/weyne Faroole tacsi tiiraanyo leh u diray eheladii dadkii ku geeryooday, kuwii ku dhaawacmay iyo dhammaan dadkii hantidu halkaasi uga baaba?day. Waxaana uu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay in ay baaq u direen beesha caalamka sidii ay gurmad ugu fidin lahayd dadka masiibadaan ay saamaysay.
Maxamed C/llaahi Cali ?kooshin?
Hawlo nadiifin iyo dib u hagaajin ah oo ka socota dhulkii ballaarnaa ee uu ka gubtay suuqii waynaa ee magaalada Bossaso.
Mudanayaasha baarlamaanka oo xilkii ka qaaday M/weynaha Galmudug.